3D Glue Buuxa
3D Xabagta Edge
3D UV Xabagta
3D cusbi gees
Laydhka buluugga ah
Boodhka ka hortagga
Logo-been abuur ah
2X-3X Xoog leh
Apple ee IPhone 13 difaaca muraayadda muraayadda muraayadda leh ayaa la bilaabay bishii Abriil
In kasta oo iPhone 13 ay bilo ka harsan tahay sii deyntiisa, lana filayo Sebtember 2021, Iyadoo ah soo saaraha hormuudka ka ah ilaaliyaha shaashadda, OTAO had iyo jeer waxay ku dadaaleysaa inay hesho xogta shaashadaha taleefannada gacanta si ay u horumariso alaabada la xiriirta, isla markaana u soo bandhigto muraayadaha kulul. .
Ilaaliyaha shaashadda ayaa ku anfacaya adiga !!!
Muxuu yahay dareenkaaga haddii shaashaddaada la xoqay oo la jabiyay markii taleefanka gacanta hoos u dhaco ?? Maxaad sameyn doontaa markaa? 1. Ma jeceshahay inaad qarash gareyso USD800-1000 si aad u iibsato mid cusub oo taleefan gacmeed ah? Gaar ahaan taleefanka asalka ah ee kaliya shirkad kula ah nus ama hal ...
Shiineeska fasaxa sanadka cusub iyo amarka ilaaliyaha shaashadda
Sannadka Cusub ee Shiinaha ayaa imanaya markii waqtigu sii socdo, oo sidoo kale loo yaqaan 'Festival Festival'. Waa dabaaldeggii ugu weynaa ee ka dhaca Shiinaha, oo leh toddobo maalmood oo fasax ah. Munaasabada sanadlaha ah ee ugu quruxda badan, Sanadka Cusub ee Shiinaha wuxuu socdaa laba toddobaad, ciribtirkuna wuxuu yimaadaa agagaarka Shiinaha Cusub Ee ...
2020 OTAO Party Annual Party oo la qabtay Janaayo 20th
Markii uu dillaacay cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' bilowga sanadka, dhammaan waddammada ayaa si adag u xakameeya soo gelitaanka dadka, taas oo si ba'an u saameysa ganacsiga caalamiga ah. Iyadoo la joojinayo joogteynta bandhigyada qad la'aanta, mugga iibka ee macaamiisha tafaariiqda qadka ...
3D-u eg Silicon
3 / F, Bldg B, Zhashi Industrial Park, # 16 Lixin Wadada, Danzhutou Nanwan, Degmada Longgang, Magaalada Shenzhen, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay. Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Dhammaan Alaabooyinka